ज्योतिषको आधारमा आज हामी तपाईलाई शरीरका यस्तो स्थान बताउँदैछौं जहाँ कोठी हुनु निकै राम्रो र शुभ मानिन्छ । मानव शरीरमा प्राकृतिक रुपमा विभिन्न स्थानमा कोठी हुने गर्दछन् । केही मानिसहरुलाई शरिरको यो कोठी निकै राम्रो लाग्छ भने कतिलाई यस्तो कोठी घृणा लाग्छन् । तर कोठी कुन स्थानमा हुन्छ, त्यसले भाग्यलाई पनि दर्साउँछ । ज्योतिषको आधारमा […]
ज्योतिषशास्त्रको अनुसार बिहान उठ्ने बित्तिकै केही समयसम्म कुनै पनि अशुभ चिज हेर्नुहुँदैन । नत्र पूरा दिन त्यसको नकारात्मक असर पर्छ । यसबाट तपाईको कामकाज पनि प्रभावित हुन्छ । केही यस्ता चिजहरु छन्, जसलाई बिहान बिहानै हेर्दा दिनभर खर्च र नोक्सान बढ्छ । ती अशुभ चिजको कारणले विवाद र तनावको साथमा दिन बित्छ । साथै यसको […]
गीताको सार बुझौँ
जीवनको अर्थ निस्काम कर्म, त्याग योग र बलिदानमय जीवन यहि नै हो परम पवित्र ग्रन्थ गीताको दिव्य सन्देश हो । ब्यर्थ किन कलह ? लिएर केहि आएनौ र लिएर केहि जादैनौ गरेका कर्म बाहेक, पवित्र ग्रन्थ गीताको सार तल प्रस्तुत गरीएको छ । १. किन व्यर्थ चिन्ता गर्छौ ? कोदेखि व्यर्थै डराउदछौ ? तिमीलाई कसले […]
हरेक धर्मको आफ्नो आफ्नो परम्परा र रितिरिवाज हुन्छ । यो प्रक्रिया हरेक धर्ममा अलग-अलग तरिकाबाट गरिने गरिएको छ । मुस्लिम तथा इसाई धर्ममा शव गाड्ने गरिन्छ भने हिन्दू धर्ममा शव जलाउने गरिन्छ । हिन्दू धर्ममा शवलाई जलाइनुको पछाडि यस्तो मान्यता छ : हिन्दू धर्ममा १६ संस्कार रहेका छन् । र, मृत्यु संस्कार अन्तिम संस्कार हो […]